Kukosha Kwemukati Mune SEO: Iyo Yakapihwa Nhungamiro Na Semalt
Maitiro ekugadzira zvinyorwa izvo zvakagadzirirwa injini dzekutsvaga
Mazhinji mawebhusaiti anoshuvira kunyorwa pakati peGoogle TOP zana masaiti. Huwandu hweaya mawebhusaiti anoedza kuedza kugadzirisa mawebhusaiti avo ekutsvaga injini. Vashoma vashoma nhamba yavo vanonyatsonzwisisa kukosha kwezvinhu mune SEO.
Nezve chinzvimbo kumusoro kwepamusoro pekubvunza kwekutsvaga, zviri mukati mewebsite yako zvinogona kufananidzwa neinjini yemota yako. Mota yako haifambi inch isina injini, saka webhusaiti yako haizofambi iri mushe isina zvinogadzirwa.
Kana zvako zvirimo zviri zvemhando yepamusoro uye dzimwe SEO nzira dzako dziri topnotch, pasina nguva, yako webhusaiti ichave iri pamusoro yekutsvaga injini masosi. Reverse ndiyo nyaya kana yako zvemukati uye SEO mazano asina kunaka - anogona kutungamira kune zvirango kubva kuGoogle. Kamwe webhusaiti painorohwa nechirango cheGoogle, vanowanzozviwana zvakaoma zvakanyanya kupora kubva mairi.
Semalt ine chinangwa chekubatsira iwe kuti unzwisise kukosha kweiyo SEO, kuti chii chiri mukati, maitirwo akagadzirwa uye zvese zvaunogona kuita kuti uve nechokwadi chekuti zvirimo uye SEO marongero ako anoshanda kuti akupe nzvimbo pamusoro pekutsvaga. injini kubvunza.
Ngationgororei nyika yezvinyorwa uye SEO.
Chii chiri Chinyorwa?
Padanho rekutanga, zvemukati zvinongori ruzivo rwemadhijitari (zvinyorwa, mufananidzo, vhidhiyo, odhiyo) pane webhusaiti yako ine chinangwa chekujekesa, kuvaraidza kana kuzivisa vashanyi vako.
Zvakakosha zvakadii mu SEO?
Pamusoro pe3,5 bhiriyoni yekutsvaga kubvunza kunoitwa zuva nezuva paGoogle. Kuedza kuchengetedza vashandisi vavo, Google inoramba ichigadziridza ma algorithms ayo kuti ave nechokwadi chekuburitsa "zvinobatsira uye zvakakodzera mhedzisiro" munguva ipfupi inogona.
Iyo inobatsira uye yakakodzera mhedzisiro mune ino mamiriro ndeye zvemukati zvemawebhusaiti ese internet. Ivo vanobva vaiswa muchirongwa chekubatsira uye kukosha kune mushandisi ari kutsvaga.
Izvi zvinoratidza kuti zvirimo zvinofanirwa kuve zvinofanirwa kuti zvinoshandiswa neGoogle kune mushandisi zvisati zvaiswa panhamba.
Kuti uwedzere kukwanisa kweiyo kukosha kweSEO yezvinyorwa zvako, pane mamwe maitiro ayo ako zvemukati ane. Zvinosanganisira:
1. Inofanirwa kubatsira uye kudzidzisa: Kana iwe uine webhusaiti yako bhizinesi, iwe unofanirwa kusanganisira iyo nzvimbo, yekuonana ruzivo, zvigadzirwa / masevhisi anopihwa, uye maawa ekushanda. Kana iwe uchikwanisa, wedzera bhurogu kuitira kuti vatengi vako vagadzikane patsva nezvebhizinesi rako.
2. Inofanirwa kuve yakawanda uye yakakosha kudarika mamwe mawebhusaiti akafanana niche: Kana iwe ukanyora nezve iwe pachako kubatsira, semuenzaniso, ita shuwa kuti zvinyorwa zvako zvinopa ruzivo rwuri nani kana maonero akasiyana nezvekuzvibatsira kupfuura emamirioni e zvinyorwa zvaipedza zuva nezuva pane imwe nyaya.
3. Inofanirwa kuve yakatendeseka: Kuvimbika kwewebsite yako kunogona kukurudzirwa kana iwe ukashandisa yekutanga kutsvaga, macations, uye zvinongedzo zvezvinhu zvesaiti yako. An munyori biography, ongororo, uye ufakazi kubva kune chaidzo-hupenyu vatengi zvakare ichavandudza zvakanyanya kuvimbika kwako.
4. Inofanirwa kuve yemhando yepamusoro: Ita shuwa kuti izvo zvirimo pane yako saiti zvakasarudzika, zvakananga kunongedzo uye zvemhando yepamusoro. Ngwarira kubirira pane chero kurasikirwa.
5. Inofanirwa kunge iri kuita: Hunza webhusaiti yako nekuwedzera mifananidzo uye mavhidhiyo. Usaite kuti vashanyi vako vavhiringidzwe nekuperetera, zvirevo, kana zvikanganiso. Ngwarira kushambadzira kwakawanda futi. Chengetedza vashanyi vako vachisimbisa nekugara vachimutsiridza. Iwe unogonazve kuvachengeta pane yako saiti kwenguva yakareba kuburikidza nemabhokisi eemaonero uye / kana yemagariro media masajeti.
Maitiro Ekugadzira Iyo Yakagadzirirwa Iyo Injini dzekutsvaga
Kuti ugadzire zvemukati zviripo, pane matanho mashoma anofanirwa kuteedzerwa.
Usati wagadzira Izvo Zviri mukati
1. Ita ongororo yeshoko repamusoro: Kuti uwane mhedzisiro yakanaka, iwe uchazoda kutsvaga kuti ndeapi mazwi makuru ari kutsvaga zvakanyanya nevateereri vako vaunoda. Chishamiso chakavimbika chekutsidzira chishandiso senge icho chinopihwa naSemalt chichava chakakura kwazvo kuita izvi.
2. Sarudza yako musoro uye mazwi akakosha anoitsigira : Izvo zvakakosha kuita keyword research kutanga kuitira kuti zvaunogadzira zvinowanikwa zvinowanikwa mumjini yekutsvaga. Kubva pane zvaunotsvaga, sarudza musoro wakakodzera wezvauri kuita. Ita shuwa kuti iwe unotarisisa pane refu-muswe keywords. Zvakare, dzivirira zvakanyanya kukwikwidza mazwi makuru nenhamba huru yekutsvaga.
3. Shongedza pepa rako rehurukuro uye zvemukati kuti zviverengeke nyore: Nzvimbo zhinji dziri kurwira kuti dzitariswe nemuenzi wese waunayo pane yako webhusaiti. Saka iwe unofanirwa kuita zvese zvaunogona kuti uvachengete glued kune zvako zvemukati. Imwe nzira yekuita izvi ndeyokugadzira zvinyorwa zvako kuti zvive nyore kuverenga.
Pazasi pane mamwe matipi anogona kunge achibatsira iwe:
a . Pwanya zvawakanyora kuita zvidiki chunks. Ndima hombe dzinotyisidzira vashanyi vazhinji kuenda. Zvakanaka kushandisa nezve 2-3 mutsara pane imwe ndima.
b . Nepamunogona napo, isai zvirevo zvidiki uye / kana mifananidzo mushure memamwe mazwi mazana maviri nemazana matatu nemakumi mairi kuti muenderere mberi kuputsa izvo zvamunowana.
4. Pemberera backlinks mune zvako zvemukati: Iyo inonyanya kuvimbika yako saiti, iyo yepamusoro inogara. Paunobatanidza mamwe mazwi kune yakakodzera uye ine webhusaiti webhusaiti, injini dzekutsvaga dzinoona kuti zvemukati zvinowanikwa. Nezve mhedzisiro yepamusoro, dzora mazwi pane yako link kusvika kune matanhatu kana pasi.
5. Namatira kumusoro wako uye chinangwa chirevo: Kana iwe uchida kugadzira iyo inonyanya kubatsira uye yakakodzera zvemukati pane yako nyaya, zvakanyanya kukosha iwe unonamatira kune yako nyaya. Uyezve usayedze kunongedza mazwi mazhinji. Ita shuwa iwe unotarisa pane yako musoro uye mazwi akakosha anoitsigira.
Mushure mekugadzira izvo zvemukati
1. Gadzirira URL yako: Iyo ndiyo kero yewebhu peji yako yakaiswa zvakananga kumusoro kwekutsvaga mhinduro. Iyo nzira iyo URL yako yakarongedzwa inogona kuona yako yekudzvanya-kuburikidza chiyero. Kana URL yako iri refu uye kana ichionekwa isinganzwisisike, inogona kutyisa vashandisi vekutsvaga kubva pakudzvanya webhusaiti yako. Izvo zvakakosha kuti URL yako iverengwe sekudzvanya-kuburikidza-nemitero zvisina kunangana padanho rako.
2. Gadzirira yako tepi yedhairekisheni: Musoro wedhairekisheni ndiyo inodzvanywa misoro inoonekwa zvakananga pasi pe URL. Hunhu hweti yako yemusoro hunogona kuita kuti mushandisi ade kubaya pane yako saiti kana kuirega. Dhagi tag tag zvakare inobatsira kutsvaga injini kunzwisisa izvo peji rako rewebhu iri.
Heano mamwe matipi anogona kukubatsira iwe kugadzirisa yako yeti tag:
a. Rega zita remakisi ritaure zvakananga izvo zviri papeji peji nezve.
b. Tepa remusoro rinofanira kunge riine makumi matanhatu kana pasi.
c. Isa mazwi ako ekutanga pakutanga.
d. Edza kusabatanidza akawanda mazwi makuru mumusoro.
3. Gadzirira tsananguro yako yemeta: Iyo meta tsananguro ndiyo pfupi snippet yemavara kubva pane yako peji iyo inoratidzika pasi pe URL uye zita remusoro. Izvo zvidiki zvirimo zvinoonekwa mune yako meta tsananguro zvine chekuita neyako----chiyero sezvo izvo zvinoonekwa ipapo nevashandisi zvichazoona kuti ivo vanozodedzera pane yako saiti kana kuramba vachipenya. Heano mamwe matipi anogona kubatsira optimize yako meta tsananguro:
a. Ita shuwa kuti meta rondedzero ipfupi uye yakatarisisa yakatarisisa yezvakanyanya zvemukati.
b. Ita shuwa kuti iyo meta tsananguro ine asingasviki 160 mavara
c. Isa akakosha mazwi mune iyo meta tsananguro (ivo vanozoratidzwa mune yekutsvaga mhinduro).
Kubatsira Kwaungaita Semalt
Izvi zvinogona kunge zvine mutsindo uye zvinogona kuratidzika sebasa rakakura. Ichi ndicho chikonzero Semalt akagadzira yakazvimiririra kukurudzira chirongwa chebhizinesi rako. Iko kukosha kwekugadzira hukuru hwekutanga mune yekutanga ndeyekuvandudza yako chinzvimbo pamjini yekutsvaga iyo, ichizotungamira kune bhizinesi rako rakabudirira.
Semalt anotora kushushikana pauri uye anoita bhizinesi rako repamhepo ribudirire.
Ivo vanopa zvinoshamisa zvigadzirwa uye masevhisi kuti ave nechokwadi chako ewebhusaiti chinzvimbo zvakanyanya. Izvi zvinosanganisira:
1. AutoSEO: Semalt's AutoSEO inovimbisa mibairo mikuru mukati menguva pfupi. Iyi SEO package inosunungura: webhusaiti kuoneka kwekuvandudza; on-peji optimization; chivakwa chekubatanidza; keyword research; uye webhu analytics mishumo. Dzvanya apa kuti utange.
2. Yakazara SEO: Izvi zvinosanganisira iseti yepamusoro yema SEO maitiro akagadzirirwa mhedzisiro iri nani. Semalt Yakazara SEO inonunura: mukati mekutarisa; webhusaiti kukanganisa; kunyora zvemukati; kubatana kunogamuchira; Tsigiro uye kubvunzana. Tora mukana weSemalt's yakazara SEO pano .
3. Web analytics: Iyo Semalt webhusaiti analytics matanho anoratidza nzira ipfupi kuGoogle TOP10. Zvishandiso izvi zvinobatsira kutarisa yako webhusaiti masosi; vhenekera kuoneka kwenzvimbo yako pane internet; ongorora mawebhusaiti ari kukwikwidza; Ziva pane-peji optimization zvikanganiso; uye kuendesa yakazara yakazara huwandu webhu mishumo kwauri. Unogona kuwana yako yemahara yewebhu analytics mishumo izvozvi.
4. Webhu kuvandudza: Kutanga zvinoratidzwa zvine basa online pamwe nemamiriro chaiwo ehupenyu. Mufananidzo unokwezva unobatsira kuwana vatengi vangangoita Semalt inovimbisa kuti webhusaiti yako inoratidzika zvakanyanya uye inoshamwaridzana nevatengi vako. Semalt inyanzvi yewebhu vanogadzira vanopa: inoratidzika uye inoshanda webhu dhizaini; zvemukati maneja system mhinduro; kuwedzera kuoneka; laini plugin kubatanidzwa uye API; E-commerce inowedzera; kutsigira uye kuchengetedza.
5. Dhidhiyo kugadzirwa: Asides achiendesa topnotch akanyorwa zvemukati kune vatengi vavo, Semalt inoitawo inotyisa zvemavhidhiyo zvemukati kukuchengeta iwe uri pamberi pemakwikwi.
Zvemukati ndimambo mune yekutsvaga injini optimization. Zvemukati mako zvinokwanisa kuita bhizinesi rako kana kuzviputsa. Neruzivo rwunounganidzwa pano, unogona kubudirira kugadzira zvekudyara zvemukati kana zviri nani zvakadaro, zvichisiyire mumaoko ezvakanyanya mune SEO bhizinesi - Semalt.